၃၅ လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံလမ်း အထက်ဘလောက်ရှိ နောက်ဖေးလမ်းကြား ဥယျာဉ်တွင် ကလေးငယ်များအတ? - Yangon Media Group
၃၅ လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံလမ်း အထက်ဘလောက်ရှိ နောက်ဖေးလမ်းကြား ဥယျာဉ်တွင် ကလေးငယ်များအတ?
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ၃၅ လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း (ဘားလမ်း) အထက်ဘလောက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်တွင် ကလေးငယ်များအတွက် ပန်းချီပြိုင်ပွဲနှင့် ပန်းအလှစိုက်ပြိုင်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် နေ့လယ် ၂ နာရီက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သီတင်းကျွတ်ကာလဖြစ်သည့်အတွက် ကလေးငယ်များအတွက် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအနေဖြင့် လမ်းကြား ဥယျာဉ်ကော်မတီနှင့် ကျောက်တံတားမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ကြည်ပြာတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းပြိုင်ပွဲတွင် မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၄၅ ဦးက သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆိုင်သည့် ပန်းချီနှင့် ပန်းပင်စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကို ဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်စေခြင်းဖြစ်ပြီး ပထမ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယဆုများကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ် တစ်ခုဖော်ဆောင်ရန်လွယ်သော်လည်း ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး အတွက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ရှိမှသာလျှင် အဆင်ပြေနိုင်ကြောင်း ကျောက်တံတားမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ကြည်ပြာကပြောသည်။
”အမှိုက်တွေနဲ့ အမြဲပြည့်နေတဲ့ နောက်ဖေးလမ်းကြားဆိုတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မတို့အစိုးရကာလမှာ နောက်ဖေးလမ်းကြားကို ရှင်းတယ်။ ဒီတိုင်းထားရင် အမှိုက်ပစ်နိုင်လို့ လမ်းကြားဥယျာဉ်လေးတွေ ဖြစ်အောင် ပန်းပင်လေးတွေစိုက် တယ်။ နောက်ဆိုရင်စာကြည့်တိုက် ပုံစံလေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ သာသာယာယာလေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ ကလေးတွေကလည်း တော် တော်လာဆော့ကြတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သန့်ရှင်းရေအတွက်ပါတယ်။ ကလေးတွေလည်းဆော့လို့ရဖို့နဲ့ ဒီလိုပွဲလေးတွေလုပ်ချင် တယ်ဆိုရင် နေရာအရမ်းရှားပါးတဲ့ ကျောက်တံတားလိုနေရာမျိုးက အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယင်း နောက်ဖေးလမ်းကြား ဥယျာဉ်နှင့် ကလေးကစားကွင်းကို ဇွန် ၁၇ ရက် ညနေ ၄ နာရီက ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လမ်းအရှည် ပေ ၈၅ဝ တွင် ဆေးရောင်စုံပန်းချီလက်ရာများ၊ ရေသန့်ဘူးဖြင့်ပြုလုပ်ထား သော အလှပန်းအိုးများ၊ ကလေးများကစားနိုင်မည့် ဒါန်း၊ စီးဆော၊ လျှောအပါအဝင် လူကြီးများ အားကစားပြုလုပ်နိုင်မည့်ကိရိယာများကိုပါ တပ်ဆင်ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါနောက်ဖေးလမ်းကြား ဥယျာဉ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်၏ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒို့အိမ်အဖွဲ့က ကျခံပြီး ကျန် ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို သက်ဆိုင်ရာလမ်းသူ၊ လမ်းသားများက ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှစတင်၍ မြို့တွင်း ခြောက်မြို့နယ်ရှိ နောက်ဖေးလမ်းကြားအမှိုက်ရှင်းလင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ ကျယ်ဝန်းသည့်နေရာအနေအထားများတွေ့ရှိသည့်အတွက် ဒို့အိမ်အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း၍ နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်များ ဖော်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းဥယျာဉ်များတွင် သစ်ပင်၊ ပန်းပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကလေးကစားရန် ဒါန်းများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းစက်၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် နံရံဆေးရေးပန်းချီများဖြင့် အလှဆင်ထားကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာ ရွေးကောက်ပွဲ ဒီဇင်ဘာ (သို့မဟုတ်) ဇန်နဝါရီလအတွင်း ကျင်းပနိုင်ရန?
ယခုပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် ကြည့်မြင်တိုင် မျက်မမြင်ကျောင်းမှ ကျောင်းသား၊